Ubhongabhonga – The Ulwazi Programme
Ubhongabhonga isihlahla esitholakala ehlathini. Siyazimilela, emakhaya bayasitheza benzela ukubasa mabepheka noma begodola. Sinephunga uma ungena ehlathini, kodwa uma sesomile asinuki. Futhi siyancinza uma sikuthinte emzimbeni usale unamaqhubu alumayo.
Lesihlahla siyasiza uma ekhaya kuhlupha imvukuzane, ususa umhlabathi lapho ivukuze bese ugoqa ikhasi labhongabhonga ulifake emgodini – iyabaleka. Noma ihlupha ensimini idla ukudla okutshaliwe njengamazambane, izaqathi, ubhatata, konke nje lokhu okumila ngaphansi komhlabathi kuyavikeleka ngoba imvukuzane ayizwani nento enukayo bese iyahamba kuleyondawo.